people Nepal » कथा : विवाहित पुरुषलाई गलफ्रेन्डको खाँचो । कथा : विवाहित पुरुषलाई गलफ्रेन्डको खाँचो । – people Nepal
कथा : विवाहित पुरुषलाई गलफ्रेन्डको खाँचो ।
Posted on March 18, 2017 by Purna Nanda Joshi
बोर लाग्दा गलफे्रन्डसँग फिल्म हेर्न गयो, बाइक राइडिङ गयो, आइसक्रिम खायो । आहा कति मजा हुन्छ नि उनलाई जेजे भने पनि भयो काली, साले, कुत्ता, भाते, आदि ।
मभन्दा उमेर अनि सोचमा परिपक्व मानिससँग केही आदर्शका कुरा जोड्न थाले । अब एउटी रोजीसकेपछि उसैसँग खुशी खोज्ने प्रयास गर्नुस् । ट्राई टु स्याटिफाई विद हर । हो क्यार तर आई एम नट स्याटिफाई विद हर भन्दै थिए । जोड्दै थिए आफ्ना सोचहरु अनि पल्टाउँदै थिए ।
जीवनको भावी किताबका पानाहरु । म त एउटा गलफ्रेन्ड खोज्छु नै उनको ढिपी थियो । हरेक दुःख, सुख र खुशी साट्न सक्ने । यतिका वर्ष सन्तान जन्मिएर हुर्किंदा दुःख, सुख र खुशी साट्ने श्रीमतीको रहर पुगेर उनलाई कुनै जवान केटीको खाँचो परेको छ । जवानीसँग खेल्ने मोह रहेको छ । एउटी केटीसँग खुशी प्राप्त गर्ने नसक्नेले अर्कोसँग सुखी हुन सक्छु भन्ने भ्रम पो हो कि ? ती अन्जानलाई लेखको पात्र बनाइसकेको थियो यो मनले । म सुख दिन्छु तर बिहे चाहिँ गर्दिन । मलाई पनि खुशी बनाउनुपर्छ, उसले अर्थात् खोजिरहेकी गलफे्रन्डले । एउटासँग माया गर्ने आफ्नो जवानी रित्याउने अनि अर्कोसँग बिहे गर्ने केटी कस्ता होलान् ? प्रश्नले घोच्दै थिए ।
अन्जानको उत्तर गजबकै थियो । जसलाई रमाइलो गर्ने मन लाग्छ त्यसले गर्ने हो, सबैले देख्ने वा थाहा पाउने गरी लभ गर्ने होइन नि । किन अरुको अगाडि साधु सन्त कहलिन मन छ ? सीधा प्रश्न थियो मेरो अनि उत्तर आउने क्रम जारी थियो । त्यस्तो भन्न खोज्या होइन । आजकल केटा होस् या केटी बिहे भएकाहरु सबैको गलफे्रन्ड या ब्वाइफ्रेन्ड हुन्छ ।
लाइट गयो, वाइफाई पनि गयो । अनि मेरो म्यासेन्जर चल्न छोड्यो । केही समयअघि पनि अफिसमा एक विवाहित पुरुषले गिद्दे नजर लगाउँदै थिए । अनि भन्दै थिए, तिमी किन सधैँ पुरै बाउला भएको कपडा लगाउँछ्यौ । स्लिम भएकाले केटाहरुले त टन्नै जिस्क्याउँछन् होला आदि । म
काम गर्ने आएकी हुँ, फेसन सो गर्ने होइन भनेर जवाफ फर्काएपछि मुखमा बुझो लागेको थियो । उमेरमा ५० काटेको त्यो बूढो मस्तिष्कलाई मेरो लवाइसँग के मतलब । मेरो ठाउँमा युवक भएको भए के उनले त्यही प्रश्न गर्थे होलान् ? उमेरमा बाउ भन्न सुहाउनेहरुले बाटोमा हिँड्दा जिस्क्याउन खोज्ने एउटा कारण सायद गलफ्रेन्ड बनाउने सोच नै होला । कतै केटीले आँखा झिम्काई पो हाल्छे कि बुढेसकालको तलतल मेटाई पो हाल्छे कि भन्ने मानसिकता होला ।
यसरी आफ्नै श्रीमतीप्रति असन्तुष्ट भएर गलफ्रेन्डको खोजी गर्नु र केटीहरु पनि प्यासी पुरुषको साहारा बन्नुले के समाजमा सकरात्मक असर पार्ला ? श्रीमती र श्रीमानबीच सन्तुष्ट हुन नसक्दा उनीहरुको सम्बन्ध कस्तो होला ? बिहेपूर्व नै आफ्नो इच्छा, आकांक्षा र रहरहरु साट्न सक्ने दुःख अनि सुखमा हास्न सक्ने श्रीमती खोज्नु उचित हो ।